Iyo Inonzwisisika Nongedzo pane Arbitration Mutemo muUAE | UAE Arbitration Mutemo
Iyo Inonzwisisika Nongedzo pane Arbitration Mutemo muUAE
UAE Arbitration Mutemo
Hupfumi hwekuzvimirira hweUAE hwakarisimbisa senzvimbo inotungamira yezvemari. Saka nekudaro, nyika yakwevera kutarisisa kune vekunze vemabhizimusi nemakambani. Sezvingatarisirwa, izvi zvakakonzera kugadzirwa kwemasangano ebhizinesi akasiyana.
Uye nekuwedzera kwemakambani ezvokutengeserana, iyo UAE yakaona kukwira kwemakakatanwa ekutengeserana. Makakatanwa aya awedzera kuwanda nekuda kwekuderera kwehupfumi hwenyika. Kudzikira uku kwakaita kuti makambani atadze kuburitsa mari pazvinenge zvichidiwa kuzadzisa zvibvumirano zvavo nevanhu kana mamwe makambani.
Nekusimuka kwemakakatanwa, kudiwa kwegadziriro yekugadzirisa gakava iri panguva yakakodzera uye isingadhuri yakamuka. Nekudaro iyo yekutandarira kwevakawanda mukugadzirisa.
Izvo zvave, nekudaro, yave tsika yakajairwa kumabhizimusi emabhizimusi muUAE kuisa zvikamu zvekupokana kana zvibvumirano muzvibvumirano zvavo.
Ngatimboongororai kuti arbitration ndeyei musati mapinda mune yekutengesa arbitration mutemo muUAE uye nezvakanaka.
Chii chinonzi Arbitration?
Kurambidza ndiyo imwe yemasisitimu makuru ekugadzirisa gakava. Dzimwe nzira dzekugadzirisa gakava dzinosanganisira kutaurirana, kupindirana, mutemo wekubatana, uye kumhan'arira.
Pakati peiyi nzira dzakasiyana dzekugadzirisa kusawirirana, arbitration inomira pachena. Izvi zvinodaro nekuda kwesimba rayo maficha.
Chimwe chezvinhu zvekutanga zvekumisikidza ndechekuti masangano ebhizinesi kana vanhu vanogona kugadzirisa kusawirirana kwavo vasina kuenda kudare.
Maitiro acho anosanganisira mapato maviri anosarudza asingasarure wechitatu bato, zviri pamutemo anonzi arbitrator, kumira pakati-pese panomuka mhirizhonga. Mapato maviri aya anowirirana pamberi kuti mutongo wemutongi ndewokupedzisira uye unosunga. Mutongo uyu unonzi zviri pamutemo semubairo.
Mushure mekunge mapato maviri ari kunetsana abvumirana pane zvakadzama zvekutonga, kunzwikwa kunoenderera. Pakunzwa uku, mativi ese ari maviri anopa humbowo hwavo uye zvipupuriro kutsigira zvavanotaura.
Mushure mezvo, muyananisi anotarisa zvirevo zvemativi ese kuti vape mubairo. Mubairo uyu unowanzo kuve wekupedzisira, uye matare haanyatso kuongororazve mubairo.
Arbitration inogona kunge iri yekuzvidira kana yekumanikidza.
Zvakare, kuyananisa kwagara kuri kwekuzvidira. Asi nekufamba kwenguva, dzimwe nyika dzakazviita zvinosungirwa kana zvasvika pakugadzirisa dzimwe nyaya dzemutemo.
Ongororo yeUAE Arbitration Mutemo
Iyo UAE arbitration mutemo ine akasiyana maficha, ayo anosanganisira:
# 1. Sisitimu yemitemo
Iyo UAE arbitration mutemo unogona kazhinji kushanda munzvimbo dzakasiyana dzeUAE kunze kwenzvimbo dzemari dzemahara. Aya emahara emahara emari anozivikanwa senzvimbo dzekutengesa mahara.
Idzo inharaunda dzehupfumi uko vekunze vatengesi vanogadzira mabhizinesi avo emabhizimusi uye vanoita mabasa. Imwe yenzvimbo dzemahara ine yayo yakasarudzika yekutonga mutemo yakanangana nekukurudzira nekukwezva vekunze vatengesi.
Kune maviri emahara ekutengesa nzvimbo muAFA:
Musika wepasi rosePeka Abu Dhabi
Kunze kwenzvimbo idzi, mutemo wepakati wekugadzirisa unoshanda mune chero imwe nzvimbo muUAE.
# 2. Kukanganisa
Zvinoenderana neUAE Federal Mutemo, mapato anogona kukwikwidza mubairo wekupokana mukati memakore gumi nemashanu kana iri nyaya yevagari uye mukati memakore gumi kana iri yekutengesa. Pakupera kwenguva yakatarwa, chero danho repamutemo rine chekuita nemubairo wekumisidzana rakatemwa nguva uye harizotarisirwa nedare.
Pamusoro pezvo, mutemo unopa kuti mubairo wekupedzisira unofanirwa kupihwa mukati memwedzi mitanhatu, kutanga kubva pazuva rekutanga kunzwa.
Mutongi anogona kuwedzera kutongwa nemimwe mwedzi mitanhatu kana kudarika zvichienderana nemapato ari kupokana.
# 3. Kuvimbika kwechibvumirano chekuyananisa
Kuti chero chibvumirano chekuyananisa chishande, chinofanirwa kusangana nezvimwe zvinodiwa, zvinosanganisira:
Arbitration inofanira kunge iri mune yakanyorwa fomati. Izvi zvinogona kusanganisira kuchinjana kana kunyorwa zvemagetsi zvemashoko.
Iye munhu ari kusaina kondirakiti yechibvumirano achimiririra nzvimbo anofanirwa kuve nemvumo yekutora danho rakadai.
Kana munhu wechisikigo akasaina chibvumirano, iye munhu anofanira kunge ari munhu anokwanisa kuita mabasa avo epamutemo.
Kambani inogona kushandisa chibvumirano chekupokana cheimwe sekureba sekureva kwayakaita chirevo chekuyananisa chakabatanidzwa.
Uyezve, zvirevo zviri muchibvumirano chekuyananisa zvinofanira kunge zviri pachena. Mapato ese ari maviri anofanirwa zvakare kunzwisisa zvakanaka zvese zviri muchibvumirano chekuyananisa.
# 4. Mutongi
Pamutemo, hapana muganho kune huwandu hwevatongi vanogona kunge vari pane imwe nyaya. Nekudaro, kana paine kudikanwa kweanopfuura arbitrator, ipapo nhamba yevatongi inofanira kunge iri nhamba isinganzwisisike.
Pakusarudza arbitrator, pane chaiwo marongero emutemo:
Anoyananisa anofanira, nenzira dzose, kuve bato risingarerekeri asiri mudiki pasi pemutemo.
Mutongi haafanire kunge ari pasi pekurambidzwa nekuda kwekubhuroka, mhosva, kana chero zviitwa zvisiri pamutemo.
Mutongi haafanire kunge achishandira chero mapato maviri achisaina chibvumirano chekuyananisa.
# 5. Kusarudzwa kwemutongi
Mapato maviri aya ndivo vane chekuita nekusarudza vatongi. Asi kana mapato maviri asingakwanise kusvika pachibvumirano, nzvimbo yekumisidzana inogona kupindira kugadza vatongi vanokodzera.
Mushure meizvozvo, vatongi vanogadza sachigaro pakati pavo. Kana vasingakwanise kugadza sachigaro, arbitral institution ndiyo ichaita musangano.
# 6. Kuzvimiririra uye kusasarura kwemutongi
Pakudoma arbitrator, mutongi anofanira kupa chirevo chakanyorwa zviri pamutemo chinobvisa kusahadzika kwese nekusasarura. Kana paine nyaya yekuti mutongi haagone kuenderera asingasaruri mune yekugadzirisa nyaya, vanofanirwa kuzivisa mapato. Uye izvi zvinogona kuda kuti muyananisi arege nzvimbo yavo.
# 7. Kubviswa kwemutongi
Zvimwe zvinhu zvinogona kutungamira mukubviswa uye kutsiva kwevatongi, kusanganisira:
Kufa kana kutadza kwemutongi kuita mabasa avo.
Kuramba kuita kwavo mabasa.
Kuita nenzira inotungamira kunonoka kusingagadzirisike mukutongwa.
Kuita zviito zviri kutyora chibvumirano chekugadzirisa.
Zvakanakira Kusarudza Zvekutengeserana Arbitration
# 1. Rusununguko rwekusarudza iye munhu chaiye kugadzirisa gakava
Mapato ese ari maviri akasununguka kusarudza muyananisi wavanotenda kuti anokodzera basa iri. Izvi zvinobvumira mapato ese kuti atore arbitrator anonyatsonzwisisa nyaya iriko.
Ivo zvakare vane mukana wekusarudza mumwe munhu ane ruzivo rwakakwana mukugadzirisa kusawirirana pakati pemabhizinesi emabhizinesi.
# 2. Kuchinjika
Arbitration yekutengeserana inochinja nekuti inopa mapato mukana wekuraira mafambisiro acho, kusanganisira nguva nenzvimbo. Izvi zvinobvumidza mapato ese maviri kuita chirongwa chebvumirano chavanogadzikana nacho.
# 3. Yakakodzera nguva uye isingadhuri
Nekuda kwekuchinjika kwekutengesana kwekutengeserana, mapato anogona kuita kuti chirongwa chikurumidze.
Izvi zvinobatsira mukuchengetedza mari yakawandisa yakashandiswa panguva yekutonga.
# 4. Chisarudzo chekupedzisira
Sarudzo yekupedzisira yakaitwa mukuyananisa inosunga. Izvi zvinoita kuti zviomere chero bato kupihwa kukwidza kana risingagutsikane nemhedzisiro. Izvi zvakasiyana nematare edzimhosva ayo anovhura mukana wekukwirira kusingaperi.
# 5. Maitiro asina kwaakarerekera
Panyaya yemakakatanwa ebhizinesi epasirese, mapato maviri anogona kusarudza kuti kunzwi kwaizoitika kupi. Ivo vanogona zvakare kusarudza mutauro weyekugadzirisa nzira.
Bhadhara ane hunyanzvi weAU arbitration gweta
Amal Khamis Murevereri uye vanachipangamazano vezvemutemo inyanzvi-yakasimbiswa UAE gweta mutemo unozivikanwa pasirese. Isu tiri inotungamira arbitration law firm muUAE. Boka redu revamiriri rinogona kukubatsira mukunyora chibvumirano chekutonga nekutengeserana mukati mekupokana uchienderera muAFA.
Isu tine makore anopfuura makumi mashanu ezviitiko mukubata nenyaya dzakasiyana dzemutemo, kunyanya munzvimbo yekutengeserana. Isu tiri kambani yemutemo-yakanangana nevatengi inoshanda pamwe nevatengi vedu kuzadzisa zvavanoda. Saka zvido zvako zvinogona kuchengetedzwa zvakanaka nesu semumiriri wako.
Arbitration yave nzira inonyanya kufarirwa yekugadzirisa kusawirirana, kunyanya mumakakatanwa ekutengeserana uko mari zhinji inogona kunge iri panjodzi. Zvisinei, vanhu vazhinji vanoziva zvishoma nezvemutemo, uye izvo zvavanoziva zvinowanzove zvisiri izvo. Tine zvese zvinotora kubata nekugadzirisa kusawirirana kwekutengeserana, kunyangwe bato iri bhizinesi diki kana hombe bhizinesi. Svitsa kunze kwatiri nhasi uye ngatiitei basa rakanakisa rekugadzirisa gakava iri nerunyararo.